टेकनीक | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
सैमसंग टिभीहरूको लेबलिंग बुझ्न मद्दत गर्ने?
सामसु TV टिभीहरूको चिह्नलाई बुझ्नको लागि मद्दत गर्नुहुन्छ? पहिलो नजरमा, सामसु TV टिभीहरूका नामहरू अक्षर र संख्याहरूको प्रशस्तताका साथ केवल डरलाग्दो हुन्छन् जुन कुनै विशेष क्रममा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ। वास्तवमा, तपाई केहि अक्षरहरु द्वारा केहि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, ...
घरको शुद्धताका लागि इलेक्ट्रोनिक भान्सा तराजू कसरी जाँच गर्ने?
घरमा शुद्धताका लागि इलेक्ट्रोनिक किचन स्केल कसरी जाँच गर्ने? फार्मेसीमा त्यहाँ सही तराजु र तौल छन्, अवश्य। भित्र आउनुहोस् र केहि मिनेट को लागी तौल माग्नुहोस्, तपाईं संग तराजू ताकि ...
चरण परिवर्तन? चरण परिवर्तन के हो? पारीको कारण?
चरण शिफ्ट? चरण पाली भनेको के हो? शिफ्ट को कारण? एक साधारण कारणका लागि: शिफ्टका कारणहरू सर्किटमा प्रतिक्रियाशील तत्त्वहरूको उपस्थिति हुन्, किनकि तिनीहरू भेला हुन्छन् र विद्युतीय वा ...
Schauberger vortex इन्जिन को सिद्धान्त के हो?
स्काउर्गर भोर्टे इन्जिनको संचालनको सिद्धान्त के हो? विशेष आकारको भंवर सिर्जना गर्दा, जो डोनट हो, जुन एकसाथ केन्द्र र डोनटको केन्द्रिय त्रिज्या वरिपरि घुम्छ। तर ...
के यो ठूलो ठूलो सम्राट चार्ज गरेर फोन चार्ज गर्न हानिकारक छ?
उच्च एम्पेरेजको साथ चार्जरको साथ तपाईंको फोन चार्ज गर्न हानिकारक छैन? हानिकारक, प्रदर्शन जलाउन सक्छ (तत्काल होइन, तर बिस्तारै)। सामान्यतया, यो बिन्दुमा आउनेछ कि प्रदर्शनमा लगभग केहि पनि देखिने छैन, ती सबै ...
कुंडल अधिष्ठापन कसरी गर्ने
कुण्डलीको प्रेरणलाई कसरी मापन गर्ने यो सित्तैमा काम गर्दैन। इन्डक्टन्स मापन यति सजिलो काम होइन, र यो DC DC मल्टिमिटरको साथमा समाधान गर्न सकिदैन। धेरै दृष्टिकोणहरू सम्भव छ। पहिलो कुराहरु पहिले, ind indanceance ...
के रेडियो मास्को DCF-77 समय सिग्नल काम गर्दछ?
के DCF-accurate 77 सही समय रेडियो स Moscow्केतले मस्कोमा काम गरिरहेको छ DCF77 ट्रांसमिटर जर्मनीको मेनफ्लिजेन, फ्रान्कफर्टको २ 25 किलोमिटर दक्षिणपूर्व am) मा स्थित छ र यसको शक्तिको साथ k 77,5. k kHz को आवृत्तिमा सञ्चालन गर्दछ ...
यो चिप के हो ??? यो के भनिन्छ ???? HEF4094BP
यो माइक्रोक्रिसिट के हो ??? यसलाई के भनिन्छ? सिरियल इनपुटको साथ, ...
पुरानो PHILIPS टिभिमा च्यानलहरू कसरी सेट गर्ने भनेर जान्नुहुन्छ, रिमोट नियन्त्रण र टिभी मेनुमा कुनै वस्तु कहाँ छ?
टाढाको र टिभी मेनूमा त्यस्तो कुनै वस्तु नभएको पुरानो फिलिप टिभीमा कसरी च्यानलहरू ट्युन गर्ने कसलाई थाहा छ? सबै कुरा मेनुमा छ, तर "च्यानल सेटि" "होइन ...
क्यामेराको पाईलो के हो पत्ता लगाउने? Nikon D3100
क्यामेराको माइलेज के हो भनेर कसरी पत्ता लगाउने? निकोन D3100 क्यामेरा माइलेज सबैभन्दा खराब छैन! मैले के देखे र कसरी बच्चाहरूले स्कूलमा परीक्षामा जवाफ दिन्छन्, र उनीहरू ...
कृपया मलाई भन्नुहोस् कि तेल कसरी पम्प चट्टान गर्ने काम गर्दछ? उहाँका अमेरिकनहरूले गधा टाउको बोबिरहेका छन्
कृपया मलाई बताउनुहोस् कि तेल पम्प पम्प कसरी व्यवस्थित गरी काम गर्दछ? अमेरिकीहरू पनि यसलाई गधा भन्छन राम्रो इनारमा आफ्नी टाउको हल्लाउँदै। त्यहाँ पिस्टन जस्तो केहि चीज छ जसमा पहिलो सुरुमा चेक वाल्भ छ ...
म "dummies for इलेक्ट्रीशियन" जस्ता पुस्तक खोज्दै छु
म "इलेक्ट्रोशियन फर डम्मी" प्रकारको पुस्तक खोज्दै छु। इन्टरनेटमा "I AM AN ELECTRICIAN" एक नि: शुल्क म्यागजिन छ! रुडोल्फ स्वोरेन "इलेक्ट्रोनिक चरण दर कदम"। 1986 वर्ष। ऊ आफैंले किशोरावस्थामा शुरू गरेको थिएन। यस पुस्तक द्वारा धेरै ...
AF र TA को कार्यहरू के हो? रेडियोमा प्रकार्यहरू के हुन्: एएफ र टीए? उनीहरू के गर्दैछन्?
वायुसेवा र टीए कार्यहरू के हुन्? रेडियोमा के कस्ता कार्यहरू छन्: वायुसेना र टीए? तिनीहरु के गर्दैछन? वायुसेना वैकल्पिक फ्रिक्वेन्सीहरूको सूची वैकल्पिक फ्रिक्वेन्सीहरूको सूची प्रदर्शनमा देखा पर्दछ ...
मेगहोम मीटरको साथ इन्जिन कसरी बजाउनुहुन्छ?
कसरी एक megohmmeter संग ईन्जिन रिंग गर्ने? एक megohmmeter सबै भन्दा विश्वसनीय तरीका हो। तपाईं एक megohmmeter को सम्पर्क मोटर हाउजिंगमा जोड्नुहोस्, र दोस्रो घुमाउरो टर्मिनलमा र यसलाई मोड्नुहोस्, चाँडो राम्रो छ। ठीक छ जब तीर ...
जसले लाइट बल्बलाई आविष्कार गर्यो
कसले लाइट बल्बको आविष्कार गर्यो त्यो जो पहिले पेटन्ट गर्यो। सामान्यतया, पहिलो प्रकाश बल्ब र यसको लागि एक ब्याट्री प्राचीन समय मा बेबिलोनिया मा आविष्कार गरिएको थियो ... ती आविष्कारहरू जुन हामीलाई थाहा छ केवल वैज्ञानिक चोरी हो ...!
डीभिडी प्लेयरले USB फ्लैश ड्राइव पढ्न सक्दैन
DVD प्लेयरले USB स्टिक पढ्दैन। मलाई थाहा छ। तपाईको फ्ल्यास ड्राइभ फाईल प्रणाली के हो? भर्खर NTFS र FAT32 प्रयोग भएको छ। म निश्चय भन्दा बढी छु - तपाईं अब NTFS प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। ...
कुन राम्रो हो: रस्स, पनीदार वोसो वा एसिड?
कुन राम्रो छ: रोजिन, सोल्डरिंग फ्याट वा एसिड? म orthophosphoric प्रयोग गर्छु। स्पष्टसँग सोध्नुहोस्। तपाईं सोल्डरमा के जाँदै हुनुहुन्छ? मुस्कुराउनुहोस्, तिनीहरूले तपाईलाई नराम्रो कुराहरु सिकाउँदैनन्। यदि टिन धातुमा टाँस्न चाहँदैन भने, यसलाई एसिडको साथ व्यवहार गर्नुहोस्। र ...
कति MEGABITS एक MEGABIT मा छन्…। निश्चितको लागि चाहिन्छ ..
कति MEGABITS एक MEGABIT मा छन्…। तपाईलाई ठ्याक्कै चाहिन्छ .. हिँड्दै, मेगाबाइट जानकारीको मात्रा, साथै मेगाबाइटको लागि मापनको एकाई हो, र गति मेगाबाइट्स / मा वा मेगाबाइट्स / मा मापन गरिन्छ, "प्रति सेकेन्ड" कुराकानीमा हाल ...
रोटर के हो? स्ट्याक्टर के हो? ब्याकड्राइड प्लेिजमा
रोटर भनेको के हो? स्टेटर भनेको के हो? भटकिएको pliz ROTO- आन्दोलनमा, रोटेशन। स्टेटर स्थिर, आराम, गतिहीन हो। विद्युतीय मेशिनहरूमा, दुबै घुमाउरो हुन सक्छ। विकिपेडिया DC मोटर ...
घर को पराबैंगनी र अवरक्त दीपक कसरि गर्ने?
घरमा अल्ट्राभायोलेट र इन्फ्रारेड बत्ती कसरी बनाउने? DRL एक र्याग लपेट्नुहोस् र बत्तीको बाहिरी बल्बलाई तोड्नुहोस् (सावधानता!) बत्तीसाको भित्री भाग "क्वार्ट्ज बर्नर" हुन्छ, जो पराबैंगनी विकिरणको स्रोत हो। को उपयोग गरेर जडान गर्नुहोस् ...
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 3,519 प्रश्नहरू।